Voadika ny 11 Janoary 2013 10:40 GMT
Ao anatin'ny fiaraha-miasanay amin'i Syria Deeply no iarahanay mamoaka andian-dahatsoratra mandrakitra ny feon-tsivily voaforiporitra anaty fifandirana, ka ahitana ny fomba fijerin'ny mpanoratra avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao momba ny ady.
An'arivoarivony ny Syriana mampiasa ny fitaovan'ny media sosialy tahaka ny Facebook, Twitter, YouTube ary ny Skype hampielezan-dresaka sy iadian-kevitra momba ny gidragidra. Isan-kerinandro i Mohammed Sergie no manara-maso ny resadresaka an-tserasera amin'ny teny anglisy sy arabika, manatsoaka ny misongadina ao amin'izay miavaka antsoina hoe Malazan'ny Media Sosialy.
Araka izay efa novinavinaina ny adi-hevitra nanaraka izany. Nitsipaka ny kabary ny mpanohitra an'i Assad, nnavoitra fa tsy nisy zava-baovao nolazaina, raha nahazo aina kosa ny mpanohana an'i Assad, faly tsy miraharaha ny fahirano mahazo ny filohany.
Noraisin'ny vahoaka Syriana ny Kabarin'i Assad fa ankahalain'ny mpampihorohoro